China Steam sterilization Autoclave Retort ho an'ny sardinina sy tuna Shenlong
1.Ny valin-kafatra / autoclave dia azo antoka:
Ny varavaranay retort / autoclave dia mifamatotra mba hiantohana ny famehezana ny varavarana.
Ny vatan'ny retort / autoclave rehetra dia hita ao amin'ny efitranonay mba hahitana raha tsara ny welding.
Ny tanjonay dia tokony hanambatra sy hanatsara ny kalitao avo lenta sy fanamboarana ny entana ankehitriny, mandritra izany fotoana izany dia mamokatra vahaolana vaovao hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa tsy manam-paharoa hisafidianana Massive Selection ho an'ny China Industrial Commercial Steam Cooker Retort ho an'ny Meat Retort Pouch, ny tanjonay dia ny mamela anao hamorona fifandraisana maharitra miaraka amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fahaizana varotra varotra.
Safidy lehibe ho an'ny China Retort Sterilizer, Retort Pouch, Miorina amin'ny tsipika famokarana mandeha ho azy, ny fantsom-pividianana fitaovana tsy miova ary ny rafitra fananganana subcontrant haingana dia natsangana tany amin'ny tanibe China mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa midadasika sy avo kokoa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izahay dia nanantena ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifa marobe manerantany ho an'ny fampandrosoana iraisana sy ny tombotsoan'ny tsirairay! Ny fahatokisanao sy ny fankatoavanao no valiny tsara indrindra amin'ny ezaka ataonay. Mitazona ny marina, manavao ary mahomby, manantena am-pahatsorana izahay fa afaka hiara-hiasa hamorona ny ho avy mamirapiratra!
Ny etona eo ambany tsindry dia manome tombony marobe amin'ny fanodinana vokatra lacf ao anaty kaontenera vy.
1 、 Izy io dia fitaovana tsara indrindra amin'ny famindrana hafanana
2, voafehy mora ny mari-pana ao.
3, ny tsindry etona takiana ao amin'ny retort mba hahatratrarana ny mari-pana ilaina amin'ny fangarony dia manohitra ny fandanjana ny tsindry namboarina tao anatin'ny fitoeran-javatra nandritra ny fanodinana.
4, Steam dia azo amboarina mora foana ary hotehirizina ho tahiry hampiasaina eo noho eo.
5, ny fananana angovo voatahiry avy amin'ny etona dia mahatonga azy ho mpanamory hafanana ambony raha oharina amin'ny rano na rivotra-etona
Ny fizotran'ny famerenana ny setroka dia misy dingana 5: Fizaran-drivotra mangatsiaka, dingana fanamafisana, dingana mitazona, dingana fanamafisana ny tsindry ary dingana mangatsiaka。
Mari-pana endrika 145 ℃ 145 ℃
Ny orinasanay dia nanomboka nanamboatra retort / autoclave tamin'ny 2004, manana traikefa 10 taona mahery amin'ity faritra ity izahay. Noho izany, azonao atokisana ny kalitaonay sy ny ekipanay.
Teo aloha: valiny fanodinana rano mandeha ho azy ho an'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro am-bifotsy
Manaraka: Rano famafazana rano Sprortization sakafo vita am-bifotsy